Sivavanye i-LG G5, i-smartphone yemodyuli ngekhamera ebalaseleyo | Iindaba zeGajethi
Sivavanye i-LG G5, i-smartphone yemodyuli enekhamera ebalaseleyo
El LG G5 Yayisisisixhobo sokuqala esineemodyuli esasungulwa kwimarike, nangona sinokuthi ngaphandle kokufuna ukunika abasebenzisi amandla amatsha, khange ikwazi ukoyisa ngokupheleleyo. Kwezi veki zidlulileyo sifumene ithuba lokuvavanya kunye nokuhlalutya esi sigxina kubulelwe i-LG Spain, esiya kubulela kuye, kwaye kweli nqaku siza kukubonisa uhlalutyo oluneenkcukacha, kunye noluvo lwethu.
Njengomboniso singakuxelela ukuba LG G4 usishiye sanelisekile ngendlela engenakulinganiswa, kwaye Nangona le LG G5 ingeyiyo i-smartphone embi, inezinto ezintle kakhulu, sikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba i-LG ithathe inyathelo lokubuyela umva neflegi yayo entsha..
Ukuba ufuna ukwazi nzulu zonke iimpawu kunye nokubalulwa kwale LG G5, amanqaku ayo alungileyo kunye neendawo zayo ezimbi, qhubeka ufunda eli nqaku kuba apha siza kukuxelela izinto ezininzi malunga nesiphelo esitsha se-LG, esiya kuthi okwethutyana ngoku Ungathenga ngexabiso elingaphezulu kwexabiso elinomdla.
2 Iinkcukacha eziphambili ze-LG G5
4 Isikrini sibalasele, ukukhanya kukubi kakhulu
5 I-Hardware ye-state-of-art ilingana nokusebenza okuphezulu
6 Ikhamera ephindwe kabini ye-LG G5, mhlawumbi eyona nto iphambili kwesi sigxina
8 Isigwebo; eyahlukileyo, kodwa enegumbi elininzi lokuphucula
9 Ixabiso kunye nokufumaneka
Malunga noyilo Le LG G5 sisiphelo esihle kakhulu esixabisayo sokuba, njengezinye iiterminal ze-LG zangaphambili, umphambili ucoceke ngokupheleleyo kwaye ngaphandle kweqhosha. Sifumana kuphela ulawulo lwevolumu kwicala lasekhohlo lesiphelo kunye neqhosha lokutshixa, elibandakanya inzwa yeminwe, ngasemva, ngezantsi nje kwekhamera.
Yonke i-smartphone inokugqitywa kwesinyithi, kwimeko yethu ngegolide kwaye oko kunika imvakalelo enkulu ekuchukumiseni. Ukongeza, enye yezinto ebambe umdla wam kukuba xa ubambe i-terminal kubonakala kuncinci kunokuba injalo, ikakhulu ngenxa yokuncipha kwesakhelo sesixhobo.
Ngelishwa, ayisiyiyo yonke into enokuba ntle ngokwendlela yoyilo, kwaye ukuba sigxila kwikhamera yangemva siyaqonda ukuba iphuma mhlawumbi kakhulu, kwaye inokungonwabi. Ewe, ukuba uhlala usebenzisa i-terminal kunye nesigqubuthelo le ngxaki iyanyamalala.
Iinkcukacha eziphambili ze-LG G5
Apha sikubonisa ezinye ze Iimpawu ezinomdla ngakumbi kunye nokubalulwa kwe-LG G5;
Imilinganiselo: 149,4 x 73,9 x 7,7 mm
5,3-intshi QHD LCD Quantum IPS screen »kunye 2.560 x 1.440 isisombululo kunye 554ppi
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 820
Ukugcinwa kwangaphakathi kwe-32 GB kuyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ikhamera ezimbini: I-megapixel eyi-16 esemgangathweni kunye ne-engile ebanzi ye-8 megapixel
2800 mAh ibhetri
Isikrini sibalasele, ukukhanya kukubi kakhulu
Ukuba siyayeka ukuhlalutya iscreen sale LG G5 sinokuqonda ngokukhawuleza ukuba ibalasele. Kwaye ngu cNgobungakanani be-5.3 folds, le paneli ye-IPS LCD ene-Quantum Display teknoloji ivumela ukuba sijonge nawuphi na umfanekiso kumgangatho omkhulu, enemibala yendalo kakhulu kwaye eneenkcukacha ezinkulu ukuya kuthi ga kumanani, inika imvakalelo yokuba bukhali okukhulu.
Eyona nto imbi kakhulu kwesi sikrini ngokungathandabuzekiyo kukuqaqamba kwayo, okufutshane kakhulu ngaphandle, apho kunyanzelekile ukuba ube nokuqaqamba okuphezulu. Ukuqaqamba okuzenzekelayo, okusetyenziswa ngabaninzi, kushiya okuninzi ukufuna kwaye kusebenze, kuphuma kakubi ngaphandle.
Enye yezinto ezintsha ezinqabileyo yile Umsebenzi we "Soloko UVULEKILE" esivumela ukuba sigcine isikrini sihlala sikhona, ngaphandle kokuqaphela ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu, ngelixa ixesha kunye nezaziso ziboniswa. Ewe kunjalo, sinokuthi yinto enomdla ngakumbi kunento elungileyo eluncedo kuba ukucofa kabini kwiscreen ukuvusa isiphelo sethu kuyaqhubeka nokusebenza kwaye kuluncedo kubasebenzisi abaninzi.
I-Hardware ye-state-of-art ilingana nokusebenza okuphezulu
Ukuba singena ngaphakathi kwi-LG G5 sifumanisa ukuba inkwenkwezi yalo nyaka icutshunguliwe, ifayile ye I-Qualcomm Snapdragon 820 kunye ne-Adreno 530 GPU, exhaswa yi-4GB RAM. Ayicacanga into yokuba ngala macandelo ukusebenza kungaphezulu kokulungileyo phantse kuyo nayiphi na imeko.
Ukugcinwa kwangaphakathi akuyi kuba yingxaki kule flegi ye-LG kwaye nangona ine-32 GB kuphela, inokwandiswa kusetyenziswa amakhadi e-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-2 TB. Ukongeza, inkqubo yokusebenza ye-Android kunye nokusetyenziswa okufakwe ngokwendalo kuhlala kwi-8.63 GB, ishiya indawo yokugcina eyaneleyo simahla nokuba kungafuneki ukuba isebenzise ikhadi le-MicroSD.
Ikhamera ephindwe kabini ye-LG G5, mhlawumbi eyona nto iphambili kwesi sigxina
Ikhamera yale LG G5 ngokungathandabuzekiyo yenye yamandla ayo kwaye ngaphezu kwako konke ukugqiba kwabasebenzisi abaninzi, apho iimodyuli okanye uyilo lwesiphelo alunakukholisa kakhulu, bazimisele ukuthenga i-terminal kwi-LG. Kwaye yile khamera iphindwe kabini, isinika izivamvo ezimbini zomgangatho omkhulu.
Eyokuqala yezi zivamvo zii-megapixels ezili-16, zii-megapixels ezisi-8 zesibini, ezisetyenziselwa ukuphucula umgangatho wokugqibela wemifanekiso. Ngokoluvo lwethu, ikhamera yale LG G5 ikwelona nqanaba lihle kwintengiso, zombini kwiimeko eziqaqambileyo nakwiimeko ezimnyama. Ewe unokuzivavanya nengqokelela enkulu yemifanekiso esibonelela ngayo apha ngezantsi.
Inzwa ephambili yekhamera ephindwe kabini, ene-laser ekugxilwe kuyo, esivumela ukuba sifezekise inqanaba elikhulu leenkcukacha kuzo zonke iifoto zethu.. Oku kusivumela ukuba sandise iifoto ukuya kumanqanaba endinokuzama ukuthi ukuba azinakufezekiswa ngezinye izixhobo ezikwimarike.
Ikhamera yesibini ene-8 megapixel sensor, njengoko besesitshilo ngaphambili, ivumela ukuthatha imifanekiso nge-engile ye I-135 degree degree kwaye oko kusivumela ukuba sifumane imifanekiso emangalisayo. Ukuze ukwazi ukusebenzisa le ndlela yokudubula, ukuyibiza ngokuthile, kufuneka ucofe iqhosha elikhoyo kwi-interface, embindini wenxalenye ephezulu okanye ngokusebenzisa i-zoom, ethi xa ufikelela kumzuzu othile uye kule imo.
Inzwa yesibini, engawuphuculiyo umgangatho weefoto ezithathiweyo, iyanceda ukufumana iifoto ezinomdla kakhulu kwaye neziphumo kwezinye iimeko. Ngelishwa, umgangatho wemifanekiso ethathiweyo uncitshisiwe kakhulu, nangona besitsho, awunakuba nayo yonke into. Nanku umzekelo omncinci;
Kwaye ngoku ungabona igalari epheleleyo yezininzi iifoto ezithathwe nge-LG G5:
Asinakuyeka ukukubonisa ifayile ye- iziphumo zifunyenwe nge-LG G5 kwiimeko zokukhanya eziphantsi;
Emva kovavanyo oluninzi kwaye ndifikile kwisigqibo sokuba le ndawo ibhetri iphantsi, phantse kuye nawuphi na umsebenzisi. Kunzima ngokunyanisekileyo ukukholelwa ukuba into ebizwa ngokuba sisiphelo esiphakamileyo se-smartphone inokufikelela kwimarike ngebhetri ukuza kuthi ga ngoku kwiimfuno zakhe nawuphi na umsebenzisi.
Ewe kunjalo, ekuzikhuseleni kufuneka sitsho ukuba ukutshaja isixhobo kuyintsikelelo yokwenene ngenxa yenkqubo yayo yokutshaja ngokukhawuleza eya kusivumela ukuba sibe nebhetri eyaneleyo ngokuqhwanyaza kweliso.
Isigwebo; eyahlukileyo, kodwa enegumbi elininzi lokuphucula
Emva kokuvavanya le LG G5 okwethutyana, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyise eholideyini, ukuze ekugqibeleni ndikwazi ukuyivavanya kakuhle kangangeentsuku ezininzi hayi iiyure ezimbalwa. Ngeholide yam kunyaka ophelileyo, wayesele endithathile njengeqabane kwi-LG G4, endishiya ndonwabe kakhulu, de ndayithenga ukuze ndiyisebenzise. Ngeli xesha andizukuyithenga, nangona ishiye incasa elungileyo emlonyeni wam.
Kwindawo yokuqala Ndikuthanda kakhulu ukuzibophelela kwe-LG ekuzimiseleni kwizinto ezintsha, ebifuna ukudlala ikhadi lokugqibela leemodyuli, ezinokunika abasebenzisi umdlalo omninzi, nangona kubonakala ngathi ukubheja akuhambi njengoko bekulindelwe. Ngokoluvo lwam uyilo lungaphezulu kokulungileyo, nangona ukuba uqhele iscreen se-5.5 okanye i-intshi ye-6 inokubonakala incinci kakhulu. Ukongeza, into ecace gca kukuba xa ungacingi ngokufaka isiciko kwi-LG G5, iyakuphelela emhlabeni phantse yonke imihla.
Igumbi liya kudlula kulo naluphi na uviwo kwaye liya kugqwesa uninzi lweetheminali ezilungileyo kwimarike kuba isinika iziphumo zomgangatho omkhulu. Ukongeza, ukubanakho ukuthatha imifanekiso nge-engile yeedigri ze-135 kungaphezulu komdla.
Okokugqibela, andinakusivala esi sigwebo ngaphandle kokuthetha ngebhetri, ubuncinci endishiyele ukubanda. Ngaphandle kokusebenzisa kakubi isixhobo, andizange ndifumane ibhetri ukufikelela ekupheleni kosuku. Ekukhuseleni le LG G5 kufuneka nditsho ukuba ukusuka kuhlaziyo olusungulwe yinkampani yaseMzantsi Korea izinto ziphuculwe kakhulu, nangona oko kukude kulindelo ebendinalo.
Ukuba sivavanya isiphelo sendlela siphela, sihlala sikhumbula izinto ezimbi nezingalunganga, ndicinga ukuba le LG G5 inokufikelela kwinqaku eli-8 okanye elingu-8.5, nangona inokuba nomda obaluleke kakhulu wokuphuculwa, othi amarhe amva nje ixesha elingena kuze sibone.
Le LG G5 sele ifumaneka kwintengiso iinyanga ezimbalwa kwaye okwangoku sinokuyifumana ngamaxabiso ahlukeneyo anokuqala ngokugqibeleleyo kwi-430 euro kwaye inyukele kwi-500 euro. Ukuba uza kufumana iflegi ye-LG, uphonononge ngokweenkcukacha onke amaxabiso akhoyo kwintengiso, ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuthenga.
KwiAmazon umzekelo unokukufumana oku I-LG G5 ye-430 euro.
Uyilo lweemodyuli kunye nezinto ezisetyenziswayo
Uyilo lweemodyuli ngamanye amaxesha ngokuqinisekileyo alonwabisi
Ucinga ntoni ngale LG G5?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sivavanye i-LG G5, i-smartphone yemodyuli enekhamera ebalaseleyo
UFrancisco López Mendez sitsho
Molo ovela ePuebla.
Ndinomdla kwizixhobo zakho, ndingazithenga phi.
Phendula kuFrancisco López Mendez
Sukuyithenga le fowuni isisiqhushumbisi, ndiyithelekisa ne-Samsung, ibhetri iyacekiseka, enye eseleyo ngexabiso ayifanele, ukuba yeyekhamera thenga iHuawei. Ndine lg g5 kwaye i-gps iyasilela apho i-Samsung s2 yam ingazange isilele, uluhlu olungenazingcingo olungenacingo. Ayinayo i-fm radio, nangona uninzi eYurophu nase-USA kubonakala ngathi luzisa ngolo hlobo. Njengoko inqaku lisitsho, ukuphatha okuzenzekelayo kokuqaqamba nesandi. Iwhatsapp enesi sixhobo imakrofoni yehlisa ivolumu ngokuzenzekelayo kwaye i-LG kunye neWhatsApp andazi ukuba kutheni nangona ndimele ndivume ukuba ukusukela ngohlaziyo lokugqibela into iphuculiwe.
IMicrosoft ikubonelela ngama- $ 650 ukuba urhweba kwiMacBook yakho yeNcwadi eSurface
I-Meizu M5 sele isemthethweni kwaye iya kukubiza ukuba ukholelwe ukuba kufanelekile ngaphezulu kwe-100 ye-euro